Weli ma garanaysid waxa lagu siinayo Reyes? Qalabka elektarooniga ah waligaa waad saxnaan doontaa | Androidsis
Ignacio Sala | | Aaladaha Android, Smartwatch, Kiniiniyada Android
Laba maalmood gudahood ayaa Saddexda Xikmadle iman doonaan, haddii ay dhacdo ka dib habeenka sannadka cusub, weli ma aadan garan maalinta aad ku jirto. Hadaadan hadiyad wali iibsan Kuwa kuugu dhow, uma baahnid inaad u carartid dukaan kasta si aad u iibsato waxa ugu horreeya ee aad aragto ama ku sameyso wax kaa qosol badan, maxaa yeelay hubaal waxaad u muuqan doontaa wax xun.
Qalabka elektarooniga ah maanta, waa kala-dambeynta maalinta iyo mid siinta marwalba waxay kaa dhigeysaa wax fiican. Taleefoonnada casriga ah, kiniiniyada, tirinta jijimooyinka, saacadaha casriga ah, nadiifiyeyaasha aaladaha robotka, aaladaha casriga ah ... Annaga Amazon waxaan haysannaa qalab elektiroonig ah oo aad u badan oo aan soo iibsanno oo aan helno ka hor Maalinta Saddex Boqor.
Laakiin sidoo kale, haddii ay ugu wacan tahay xaddidaadda dhaqdhaqaaqa ee gobollada qaarkood, ma dhaqaaqi kartid, Amazon si toos ah ayey u rarikaraan Cinwaanka saaxiibkaa ama qaraabadaada, adoo ka faa'iideysanaya ikhtiyaarkan ay soo bandhigtay shirkadda Jeff Bezos isla markaana si kadis ah u bixinaya wax yar oo dheeri ah si loogu duuduubo oo loo geeyo hadiyad ahaan.
1 Aaladaha iskuxiran
2 Tirinta jijimooyinka
3 smart soo jeedo
4 casriga ah
6 kuwa kale
Amazon smart ku hadla waa talaabada ugu horeysa ee lagu galo internetka waxyaabaha, Tan iyo amarrada codka ee fudud, waxaan daari karnaa nalalka, dami karnaa, waxaan ka dhigi karnaa filim telefishanka, bilaabi karnaa mashiinka dharka lagu dhaqo ... marka lagu daro xallinta shaki kasta oo maskaxda ku soo dhaca.
Haddii aadan hubin haddii aad runtii wax badan ka faa'iidi doonto, waad dooran kartaa aasaasiga ah, Jiilka Amazon Echo Dot 3aad, aalad loo heli karo 24,99 euro, hoos uga dhacday 49,99 euro caadiga ah.
Hadaad ku rabto shaashad, Ma leedahay 5-inji Echo Show 44,99 euro (hooseeya oo ah 89,99 euro) ama kan 8-inji Echo Show 64,99 euro (qiimaheeda caadiga ah uu yahay 129,99 euro).
Haddii TV-gaagu aanu ahayn mid caqli-gal ah ama in kasta oo isku xidhka codsiyada iyo adeegyada, uma istaago garaadkiisa, waad dooran kartaa Fire TV Stick Lite oo ah 24,99 euro ama Dabka TV Stick ee 29,99 euro. Thanks to qalabkan, waxaan weydiisan karnaa Alexa inuu ku ciyaaro filim Netflix ama taxane ah telefishanka, Amazon Prime ...
Haddii aan ka hadalno tirinta jijimooyin, waa inaan ka hadalnaa Xiaomi Mi Band 5, lLayligii lagu cabiray jijimadii adduunka ugu iibka badnaa labadaba qiimaheeda hoose iyo faaidooyinka badan ee ay ina siiso. The Mi Band5 waxaa loo heli karaa 29 euro, laakiin kaligeed maahan.
Ikhtiyaar kale oo xiiso leh ayaa ah Qeybta 4C, sidoo kale ka socota Xiaomi, labaduba waxay na siiyaan a bandhig midab iyadoo la xakameynayo xaddiga wadnaha, kormeerka hurdada iyo howlaha isboortiga ... Sharaf Bandid 5, oo leh qalabka garaaca wadnaha iyo mitirka oksijiinta dhiigga ee 33,99 euro waa ikhtiyaar kale oo la tixgeliyo.
In kasta oo ay run tahay in aan inta badan kugula talinno aaladaha Aasiyaanka ee jaban ee ka imanaya noocyada ay waalidkood garanayaan oo keliya ah Willfull, saacad caqli badan kaas oo leh in kabadan 8000 qiimeyn celcelis ahaan 4,5 5tii xidigood.
Saacaddan casriga ah, tWaxaa lagu qiimeeyaa 40,99 euro waxay noo ogolaaneysaa inaan la socono hurdada, tirino talaabooyinka, isku dhafno kormeeraha heerka garaaca wadnaha, waa mid buufin u adkaysata ... waxaana lagu heli karaa midabbo kala duwan: madow, cawl, cagaar, casaan iyo dahab buluug ah.
Haddii aad raadinayso tayo iyo tiro badan oo hawlo ah, xalka Samsung ay na siiso Galaxy Watch Firfircoon 2 oo ah 239 euro ama Galaxy Watch 3 oo ah 399 euro, waa laba ikhtiyaar oo laga fiirsado.
Huawei ayaa na siisa kaliya 94 euro el Huawei Watch GT Fashion, qalab leh GPS, garaaca wadnaha iyo kormeerka hurdada. Jiilka labaad ee qaabkan, the Daawo GT2 Sport, oo loo heli karo 129 euro, ayaa si aad ah ugu jihaysan ciyaartooyda waxayna na siisaa ficil ahaan isla shaqooyinka ay la mid yihiin GT Fashion laakiin leh qaab keydinta tamarta ah oo noo oggolaan doona inaan tagno 2 toddobaad oo aan lacag la soo dalaacin.
Halkan wax walba waxay kuxirantahay miisaaniyadaada, maadaama aan ka heli karno mobilada kudhowaad 1000 euro ilaa mobilada ka bilaabma 100 euro. Hoos waxaan ku tusayaa dalabyada ugu fiican ee shirkadaha waaweyn ee casriga sameeya.
Xiaomi Mi Note 10 Lite oo ah 331 euro. Shaashadda 6,47-inji, 6 GB oo RAM ah, 64 GB kaydinta, Android 10, batari 5.206 Mah, xawaareyn degdeg ah, Snapdragon 730 G, 4 kamaradaha gadaal ah ...
realme 7 Pro oo ah 274 euro. Naqshad leh shaashad 6,4-inji ah, 8 GB oo RAM ah, 128 GB oo keyd ah, SuperAMOLED Full HD + shaashad, Android 10, 64 MP oo ah dareeraha indhaha ugu weyn ee ay soo saartay shirkadda Sony.
Oppo Raadi X2 NEO 5G oo ah 495 euro. Terminalkan wuxuu leeyahay shaashad 6,5-inji ah, wuxuu la jaan qaadayaa shabakadaha 5G, wuxuu leeyahay 12 GB oo RAM ah iyo 256 GB oo keyd ah, afar kamaradood oo gadaal ah, Android 10, 4.000 mAh baytari ...
Galaxy Note 20 5G oo ah 778 euro. Moodelkan, waxaa lagu heli karaa nooca 256 GB, wuxuu na siinayaa 3x zoom isku dhafan, 6,7-inji Super AMOLED + shaasha ah, 4.300 mAh baytari, S Pen ... mid ka mid ah taleefannada casriga ah ee ugu fiican suuqa oo waliba la jaanqaadaya stylus.
Motorola G9 Plus waa 199 euro. Haddii aadan rabin inaad lacag badan ku bixiso, moodeelkan Motorola oo leh shaashad 6,8-inji ah iyo 5.000 mAh batari waa ikhtiyaar aad u xiiso badan, maadaama ay sidoo kale ku jiraan 4 GB RAM iyo 128 GB oo keyd ah.
La Huawei Mediapad T5, a Shaashadda 10,5-inji, 2 GB oo RAM ah iyo 32 GB oo keyd ah Waa ikhtiyaar xiiso leh in lagu cuno waxyaabo badan oo warbaahin ah guriga 139 euro. Moodelkan ayaa sidoo kale laga heli karaa gudaha 4 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo ah nooca keydinta ee 179 euro, waa ikhtiyaar ka fiican haddii aan dooneyno inaan sida ugu badan uga faa'iideysanno kiniinka oo aan kaliya ku cunin waxyaabaha.
Lenovo ayaa noo diyaarinaysa M10, kiniin ah 251 euro, wuxuu na siiyaa a 10.3-inch bandhigay, 4GB RAM, 64GB kaydinta (oo lagu ballaarin karo kaarka microSD), Android 9 iyo Wi-Fi iyo isku xirka LTE. The Galaxy Tab A 7 laga bilaabo Samsung, oo leh 3 GB oo RA ah iyo 32 GB oo keyd ah oo loogu talagalay 259 euro, waa ikhtiyaar ku habboon haddii aad horeyba taleefanka gacanta uga haysato shirkaddan iyada oo ay ugu wacan tahay is dhexgalka nidaamkeeda deegaanka.
Haddii aad rabto inaad ku isticmaasho S Pen kaniinigaaga, Samsung ayaa na siineysa Galaxy Tab S6 Lite, kiniin 10-inji ah oo 4 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo keyd ah oo u dhiganta 399 euro. Ikhtiyaar kale, oo ka qaalisan laakiin leh astaamaha ugu fiican ee suuqa ayaa laga heli karaa Galaxy Tab S7, kiniin 11-inch ah oo leh 128/256 GB oo keyd ah, oo leh S Pen for 599 euro oo loogu talagalay nooca 128 GB iyo 699 euro oo loogu talagalay nooca 256 GB.
Haddii aadan dhib ka qabin in adeegyada Google aan laga heli karin kiniin, MediaPad Pro de 10.8 inji, 6 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo keyd ah oo keliya 479 euro, waa ikhtiyaar in la tixgeliyo. Hadda, adeegyada Google waa la rakibi karaa iyada oo aan wax dhibaato ah jirin, markaa aragti ahaan, haddii aad ku tiirsan tahay Google, waad ku sii wadi kartaa inaad ku samayso kiniinkan.
Haddii aad raadineyso kiniin jaban ku raaxeyso fiidiyowga qulqulka ah inta badan ama akhri buugaagta, the Fire HD 8 oo ka socota Amazon oo ah 99,99 euro Waa mid ka mid ah xulashooyinka ugufiican nooca 32 GB ee keydinta. Haddii tani hoos u dhacdo, nooca 64 GB wuxuu ku kacayaa 129,99 euro.
Mid ka mid ah nadiifinta nadiifinta aaladaha robotka ee Amazon iyadoo ku dhowaad 10.000 ratings waa Taxanaha Cecotec 1090, moodel la jaan qaadaya Alexa oo la heli karo oo kaliya 145 euro. Haddii aan rabno intaas marka lagu daro xaaqitaanka, waxaan sidoo kale xoqeynaa sagxadda aan heysanno Abuur IKOHs 199 euro.
Haddii aad rabto galaan adduunka sawir waad ku sameyn kartaa adiga oo leh Nikon D3500 oo loogu talagalay 539 euro ama leh Canon EOS 2000D oo loogu talagalay 429 euro. . Ikhtiyaar kale oo xiiso leh ayaa ah Canon PowerShot G7X oo ah 492 euro, ama Canon 800D oo ah 731 yuuro.
La kaadhka xusuusta 64GB SanDisk waxaa lagu heli karaa 9,99 euro iyo nooca 128 GB oo ah 22,99 euro. Haddii aan ka hadlayno sawir qaadista, waa inaan ka hadalno a Wax alaab ah lama helin. oo leh tripod loogu talagalay mobilada 23,99 euro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Weli ma garanaysid waxa lagu siinayo Reyes? Qalabka elektarooniga ah waligaa waad saxnaan doontaa
Sida loo ogaado taraafikada wadada Khariidadaha Google